Baarlamaanka Butlaan oo ka laabtay go’aankiisii ahaa in wasiirrada mid-mid loo ansixiyo - Halbeeg News
Baarlamaanka Butlaan oo ka laabtay go’aankiisii ahaa in wasiirrada mid-mid loo ansixiyo
Barlamanka Puntland, Garoowe.
GAROOWE(HALBEEG)- Iyada oo la wada sugayo magacaabista golaha wasiirada ee maamulka Butlaan ayaa waxaa maanta shir ku saabsan hanaanka ansixinta golaha wasiirada waxaa yeeshay baarlamaanka Butlaan.
Baarlamaanka Maamul Goboleedka Butlaan ayaa ka dooday hanaanka loo horkeenayo golaha wasiirada cusub waxa ayna isku raaceen in si wadar ah hal mar loo horkeeno baarlamaanka si codka kalsoonida loo siiyo ama loogu diido Golaha Wasiirada Butlaan.
Kulanka Baarlamaanka Butlaan uu maanta yeeshay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa illaa 53 xildhibaan iyadoo markii cod loo qaaday qaabka loo siinayo kalsoonida Golaha Wasiirada ay u codeeyeen in si wadar ah loo horkeeno 26 mudane, halka 24 ay diideen waxaana ka aamusay 3 xildhibaan.
Guddoomiyaha Baarlamanka Butlaan Cabdixakiin Maxamed Axmed oo shir guddoominayey kulanka ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codeynta oo ah in si wadar ah loo ansixiyo golaha wasiirada cusub.
Go’aanka baarlamaanku ay ku gaareen in golaha wasiirrada si wadajir ah loo ansixiyo ayaa meesha ka saaray go’aankoodii hore ee ahaa in xukuumadda cusub mid-mid loo ansixiyo si loo hubiyo tayada shakhsiga wasiirka noqon doona.
Madaxweyne Farmaajo: Waa in la helaa siyaasad wax ku ool ah oo lagu horumarinayo qaxootiga Afrika
Hoggaamiyaha Butlaan oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirrada – Magacyada iyo jagooyinka